Ihe nkiri 'Midnight Mass' nke Netflix wepụtara ụjọ na obodo gbara osimiri okirikiri - iHorror
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Ihe nkiri 'Midnight Mass' nke Netflix wepụtara ụjọ na obodo gbara osimiri okirikiri
Ihe nkiri 'Midnight Mass' nke Netflix wepụtara ụjọ na obodo gbara osimiri okirikiri
by Trey Hilburn III September 8, 2021 19,569 echiche
Trailer maka ihe nkiri Netflix ọzọ Mike Flanagan na -eso Nwepu nke Ụlọ Nna na Tọ na-agba ọsọ nke Bly Manor bụ n'ikpeazụ ebe a! Mass abalị ọ dịkwa ka doozy. Ọ nwere ụfọdụ Stephen King Ihe Ndị Dị Mkpa vibes fesara na ebe n'ime ụgbọala na -adọkpụ. Enwere m nnukwu mmasị na fim dịpụrụ adịpụ nke dị n'ụsọ oké osimiri, ọtụtụ ihe nwere ike ịhie ụzọ ebipụ na mmepeanya. Trailer ahụ emeghị ka anyị daa, ọ nyere anyị ihe omimi na anụ zuru ezu iji mee ka agụụ na -agụkwu anyị. Ọ dabara nke ọma, anyị agaghị eche ogologo oge. Mass abalị ala na Netflix ma emechaa n'ọnwa a.
Na nchịkọta akụkọ maka Mass abalị na-aga dị ka nke a:
Akụkọ banyere obere agwaetiti dịpụrụ adịpụ, nke na -akwalite nkewa ya site na nloghachi nwa okorobịa ihere (Zach Gilford) na ọbịbịa onye ụkọchukwu nwere ọmarịcha (Hamish Linklater). Mgbe ọbịbịa nna Paul na agwaetiti Crockett dabara na ihe omume na -akọwaghị na ihe yiri ka ọ bụ ọrụ ebube, ịnụ ọkụ n'okpukpe ọhụrụ na -ejide obodo - mana ọrụ ebube ndị a na -efu ọnụ?
Mass abalị kpakpando Kate Siegel, Henry Thomas, Annabeth Gish, Robert Longstreet, Alex Essoe, Michael Trucco, Samantha Sloyan, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Igby Rigney, na Annarah Cymone.
You nwere obi ụtọ ịhụ Mass abalị? Mee ka anyi mara na ngalaba a.
Mass abalị ga -apụta na Netflix malite na Septemba 24.